Tallaabooyin cusub oo Looga Qaaday Coronavirus-ka Magaalada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTallaabooyin cusub oo Looga Qaaday Cudurka Wadno-galeenka ee Magaaladda
18 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Tallaabooyin cusub ayaa loo qaaday coronavirus-ka caasimadda
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa heegan ku jirtay iyada oo leh dhammaan waaxyadeeda ku aaddan la dagaallanka coronavirus. Iyada oo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Mansur Yavas, waxaa la soo saaray go'aamo cusub oo digtooni ah. Qiimaha kirada ee laga qaado ganacsiyada ay leedahay Magaalada Metropolitan ayaa dib loo dhigay muddo laba bilood ah. In kasta oo 'kefkat Evleri' lagu daro barnaamijka ka-hortagga jeermiska maalin kasta, dhismayaasha Maarso ee Tiyaatarka Caasimadda waxaa loo qaaday taariikh dambe. Si looga hortago inay dad badani ku dhacaan oo looga hortago faafitaanka fayraska, aaska muwaadiniinta leh aaska waa la sameyn doonaa iyadoo aan la sugin waqtiga salaadda. Kooxaha nadiifinta magaalooyinka waaweyn; Waxay sii wadeysaa howlaheedii wasakhda ee matxafyada, xarumaha caafimaadka, hoolalka maqalka, ururada aan dowliga aheyn, xarumaha dowliga ah, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha daryeelka waayeelka, naadiyada isboortiga, basaska iyo tagaasida.
Dowladda hoose ee Magaaladda ayaa heegan ku jirtay dhammaan qeybaha ay sabab u tahay cudurka cudurka coronavirus.
Golaha iskuduwaha caafimaadka, oo la aasaasay iyada oo uu hogaaminayo kuxigeenka xoghayaha guud Mustafa Kemal Çokakoğlu amarkii Duqa Magaalada Mansur Yavaş, ayaa daba socda daraasad ku saabsan jeermiska iyo jeermisyada jeermiska 7/24. Dowladda Hoose ee Magaala-weyn, oo diiradda saareysa howlaha nadaafadda, ayaa soo bandhigeysa tallaabooyin cusub mid mid.
KHUDBAD KIRADA MADAXWEYNAHA YAVAŞ SI AY U SHAQEEYAAN SHAQADA
Dowladda Hoose, oo uga digaysa muwaaddiniinta shaashadda magaalada, baararka iyo boodhadhka, oo ay ku jiraan xisaabaadka warbaahinta bulshada, ayaa sii wada fulinta tallaabooyin cusub oo lagula dagaallamayo cudurrada faafa.
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş ayaa ku dhawaaqay isaga oo ku dhawaaqay bayaankiisa mareegaha bulshada in rasiidyada kirada ah ee laga helo ganacsatada ay leedahay Metropolitan dib loo dhigay muddo labo bilood ah. Go'aanka la qaatay, heshiiska kirada waxaa lasiiyay ganacsiyada ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaalada iyo shirkadaha ku xiran iyo kuwa xiriirka la leh, kuwaas oo dhibaato ku qabay bixinta.
Qaababka cusub iyo go’aamada ayaa la soo saaray
Degmooyinka Waaweyn, kuwaas oo kordhiya tallaabooyinka nadaafadda ee caafimaadka bulshada; waxaa ka mid ahaa 5 Guri oo naxariis leh oo ku yaal Etlik, Ruzgar, Varlik, Ulus iyo Oncology, halkaasoo bukaannada iyo eheladooda ay ku nagaadaan, barnaamijkooda maalinlaha ah ee jeermiska faafa.
In kasta oo khidmadaha tiyaatarka caasimadda dib loo dhigo illaa waqti dambe, waxaa la hirgaliyay tallaabooyin cusub oo looga hortagayo in dad badani sameysmaan oo ay fidiyaan fayraska. In kasta oo gawaarida aaska la jabayo, aaska waxaa loo aasi doonaa iyadoo aan la sugin waqtiga salaadda, iyadoo la raacayo codsiyada muwaadiniinta haysta aaska.
SIYAASADA IYO JOOJINTA XIRIIRADA 7/24
Waaxda Ilaalinta Deegaanka iyo Xakameynta BELPLAS A.Ş. Iyada oo kooxahoodu ay sii wadaan inay shaqeeyaan habeen iyo maalin magaalada oo dhan, waxay sidoo kale ka qabtaan shaqada ka hortaga baabuurta dadweynaha, basaska iyo tagaasida maalin walba.
Go'aanka Wasaaradda Waxbarashada Qaranka, ka dib nasashadii tababarka intii u dhaxeysay 16-30 Maarso, cufnaanta rakaabka ayaa hoos u dhacday metrooga, ANKARAY, Teleferik iyo EGO, halka agaasinka guud ee EGO uu sii wado howlihiisa maalinlaha ah gaar ahaan aroortii iyo saacadaha adeegga baska fiidka iyo lambarka.
Faruk Kalender, xubin ka ah guddiga guud ee golaha farsamada gacanta iyo baabuurta Ankara Umum, ayaa yiri "Waxaan u mahadcelineynaa Degmadeenna iyo kuwii gacan ka geystey caafimaadka dadkeena iyo ganacsatada darawallada ah". Waad ku mahadsantahay adeeggan. Waxaan aad ugu faraxsanahay dhaqankan, oo aan sameynay anagoo tixgelinayna caafimaadkeena iyo caafimaadka macaamiisheena. ”
Isagoo u mahadcelinaya Duqa Magaalada Mansur Yavaş howlaha ka-hortagga ee laga sameeyay joogsiga basaska, gaar ahaan Güvenpark, Bentderesi iyo Sincan, Sincan Chauffeurs iyo Madaxweynaha Xiriirka Gawaarida Isa Yalçın wuxuu yiri:
“Cudurka daacuunka ee adduunka ka jira awgeed, halis ayaan ku nahay waddankeenna muhiimad weynna waannu u leenahay tan. Ilaahay ha ka raalli noqdee Duqa Magaalada. Gawaaridayada gabi ahaanba waa la jaray. Kuwani waa kuwo aad muhiim u ah xagga caafimaadka annaguna waxaan sidoo kale u baabi'in doonnaa gawaaridayada. ”
In kasta oo shaqooyinka nadaafadda ee ay kormeerayaan kooxaha waaxda Booliska ee Magaalooyinka waaweyni ay socdaan; Shuruudaha ka-faa’iideynta matxafyada, xarumaha caafimaadka, hoteelada, qolalka dhageysiga, dhismayaasha ururada aan dowliga ahayn, xarumaha dowliga ah, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha daryeelka waayeelka iyo naadiyada isboortiga looma diiday. Kooxaha Qaybta Suuxinta ee Magaalada waxay ka qabtaan shaqooyin nadiif ah oo saafi ah meelaha dhaqanka iyo taariikhiga ah, gaar ahaan jidadka, jidadka iyo isbaarada, meelaha la wadaago iyo meelaha lagu madadaasho.
Shirkadda Cuf Ganacsiga Kemalden ee Suuqa
Adeegga tareenka Sincan-Kayas ayaa ka bilaabmay caasimadda
Isticmaalka Gaadiidka Dadweynaha Ayaa Lagu Kala Jaray Magaalada Bursa
RayHaber 18.03.2020 Warbixinta Shirka